Tuesday, June 22, 2021 |मंगलबार, असार ८, २०७८
जनतापाटी मंगलबार, वैशाख २८, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज काठमाडौंको बसुन्धारामा संचालन हुन लागेको ‘राधा स्वामी कोभिड आइसोलन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टर’को निरीक्षण गरेका छन् ।
निरीक्षणकै क्रममा उनले तत्कालै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र मुख्य सचिव डा. शंकरदास बैरागीलाई टेलिफोन गरी आइसोलेशन केन्द्र संचालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन गरे । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशनपछि यसैसाताबाट नेपाली सेनाले आइसोलेशन केन्द्र संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
तत्काल ८८ शैयाको अक्सिजन थेरापी सुविधासहित संचालन हुन लागेको यो आइसोलेशन केन्द्रका लागि राधास्वामी केन्द्रले भवन उपलब्ध गराएको हो । आवश्यकता अनुसार २ सय बेडसम्म संचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । आइशोलेसन केन्द्रका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाली सेनाले उपचार, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ । यो आइशोलेशन केन्द्र संचालनमा आएपछि कोरोनाका बिरामीहरुको उपचारमा थप राहत मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।
काठमाडौंमा उपलब्ध ठूला भवनहरुलाई आइसोलेशन केन्द्रका रुपमा संचालन गरी कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गर्ने सोच बनाइको सिसिएमसीका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । निर्धक्क रुपमा बिरामीको उपचारमा लाग्न नेपाली सेनालाई आग्रह गर्दै उनले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई नेपाली सेनाका क्लिनिक रजिष्टार महासेनानी डा. सुमनराज डंगोलले आइसोलेशन केन्द्रको बारेमा जानकारी गराएका थिए । निरीक्षणका क्रममा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी, उपमेयर ज्ञान माया डंगोल लगायतको पनि सहभागिता थियो ।
सरकारले भन्यो - १८ गतेपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमितको खर्च व्यहोर्दैनौँ १६ मिनेट पहिले
ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने संकेत गर्दै रावलले भने - राजनीतिक नैतिकताको बोध गर्नुहोला ? ३७ मिनेट पहिले
सर्वोच्चको फैसलापछि गोकुल बास्कोटाले भने - इतिहासका निर्माता जनता हुन् ५२ मिनेट पहिले
ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने संकेत गर्दै रावलले भने - राजनीतिक नैतिकताको बोध गर्नुहोला ?
सर्वोच्चको फैसलापछि गोकुल बास्कोटाले भने - इतिहासका निर्माता जनता हुन्
माधव नेपालको आह्वान - मुलुकलाई भड्खालोमा पुग्नबाट समयमै जोगाऔँ
अदालतको फैसलाबारे नारायणकाजीको टिप्पणी - अति भएपछि खति हुन्छ
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि योगेशले भने - बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड
सभामुख सापकोटाद्वारा विपद् प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग छलफल